glucerna – Glucerna Myanmar
အမှန် သို့မဟုတ် အမှား: ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး အယူအဆအလွဲများ။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး အယူအဆအလွဲများ များစွာရှိပါသည်။ အမျိုးအစား ၁ နှင့် အမျိုးအစား ၂ ၏ကွဲပြားချက်ကို သင်စားနိုင် မစားနိုင်သည့်အရာများကို ပြောခြင်းမှ အစပြု၍ မည်သည့်အချက်အလက်သည် မှန်ကန်ပြီး မည်သည့်အချက်အလက်သည်မှားသနည်း။ ဤတွင် အချို့အများဆုံးအမှတ်မှားသော ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် ပတ်သက်သည့် အယူအဆအလွဲအချို့ကို ဖော်ပြထားသည်။
သကြားသည် ဆီးချိုသွေးချိုဖြစ်စေခြင်း၏ အရင်းမြစ်ဖြစ်သည်ကို ယုံကြည်ကြခြင်း
မြန်မာမိသားစုအများစုတွင် သကြားသည် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ၏ ရန်သူဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများသည် သကြားကို မရှောင်ရှားသင့်ပါ။ သို့သော် သကြားအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် အဓိကသော့ချက်မှာ ညီညွတ်မျှတစွာစားသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ညီညွတ်မျှတစွာစားသုံးခြင်းသည် ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများအတွက် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိရန် လိုအပ်သောအာဟာရများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ သဘာဝသစ်သီးများမှ သကြားသည် ပြုပြင်ထားသည့်အရာမဟုတ်ဘဲ ရှုပ်ထွေးပြီးရိုးရှင်းသော ကစီဓာတ်များမှ ဂလူးကို့စ်အဖြစ်ပြိုကွဲသွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်များက အသုံးပြုပါသည်။ သင်သတိထားရန်လိုအပ်သည့်သကြားများသည် သကြားလုံးများ၊ သရေစာများ၊ အသုပ်များတွင် ထည့်သည့်အရည်များ နှင့် စီရီရယ်ကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်ပြုပြင်ထားသည့် အစားအစာများတွင်ပါဝင်သည့် ပုန်းကွယ်နေသည့် သကြားများဖြစ်သည်။ သကြားတစ်ခုတည်းသည် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေသည့်အကြောင်းအရင်း မဟုတ်ပါ။ အခြားအကြောင်းအရာများဖြစ်သည့် အစားစားချိန်မမှန်ခြင်း၊ ပါဝင်သည့်အစားအစာများထိန်းညှိမှု အားနည်းခြင်း၊ နှင့် အဆီများသောအစားအစာများ သို့မဟုတ် အချိုလွန်ကဲ့သော အစားအစာများစားသုံးခြင်းနှင့် အထိုင်များသော လူနေမှုပုံစံများသည် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို တိုးတက်စေသည်။
အစားအစာများသည် ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများအတွက် နှစ်သက်ဖွယ်ရာမဟုတ်တော့ပါ။
မြန်မာအများစုသည် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဖြစ်ပွားသည်နင့် အစားအသောက်များ လျော့စားရခြင်း၊ အလွန်အမင်းကန့်သတ်ထားသည့် အစားအစာများကိုသာ စားသောက်ရသောကြောင့် အစားစားရခြင်းမှာ နှစ်လိုဖွယ်မကောင်းတော့ဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။ သင်သည် သင်၏ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ထိန်းညှိရန် သင်စားသုံးသော အစားအစာများကို အရင်ကထက်ပိုမိုရွေးချယ်ရသော်လည်း သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက် သင်စားနေကျ အစားအစာများ မစားရခြင်းက ပိုဆိုးနိုင်သည်။ သင်တွင် အခွင့်ရေးရသည်နှင့် တပြိုင်နက် အလွန်အကျွံစားမိခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤအရာကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် သင်အနှစ်သက်ဆုံး အစားအစာများကို သင်၏ဆီးချိုသွေးချိုအစားအစာ အစီအစဉ်တွင် သင့်လျော်စွာထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ထို့သို့ပြုလုပ်ရန် အတွက် အလေ့အကျင့်ယူခြင်း သို့မဟုတ် တိကျသောအရာများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အလွယ်တကူတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။ အစာစားချိန်များကို ကျော်ခြင်း သို့မဟုတ် ကယ်လိုရီများကို အလွန်အမင်းလျှော့ခြင်းတို့ကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏ မညီညွတ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အစာစားချင်စိတ်ကို မြင့်တက်စေပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီး တစ်နေ့တာလုံးအတွက်ကျန်းမာသော အစားအစာများပါဝင်သည့် အစီအစဉ်များနှင့် အတူ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းက သင့်အားကျန်းမာစွာ ပြည့်ဝစွာနေထိုင်နိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။
သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နည်းခြင်း (Hypoglycemia) – သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နည်းသော ရောဂါလက္ခဏာများသည် သင်၏အမြင်အာရုံကို သက်ရောက်မှုရှိသည့် အတွက် ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများ ကားမောင်းနှင်ခြင်းမပြုသင့်ဟုဆိုသော အဆိုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများသည် အစားအစာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ဆေးဝါများနှင့်ကောင်းစွာထိန်းနိုင်ပြီး အမြဲတမ်းလက်ထဲတွင် မုန့်တစ်မျိုးမျိုးကို ဆောင်ထားခြင်းက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နည်းခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ခံအားစနစ် (Immune System) – အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်မြင့်မားခြင်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ ခုခံအားစနစ်ကို ကာကွယ်ရန်အားနည်းသောကြောင့် ရောဂါများဖြစ်ပွားပြီး နလံထူရန် ပိုမိုကြာရှည်တတ်သည်။ ဆေးဝါးများနှင့် ကာကွယ်ဆေးများအကြောင်းကို အမြဲလေ့လာပြီး ကျန်းမာနေစေရန်နှင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ထိန်းသိမ်းရန် ကောင်းမွန်ပြီး သန့်ရှင်းသောအစားအစာများကို စားသုံးပါ။
အကယ်၍ သင်၏ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို အစားအစာများ ထိန်းချုပ်စားသုံးခြင်းသည် သင်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း မထိရောက်ပါက အချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်းနိမ့်သော ဖြည့်စွက် အာဟာရများကို ရှာဖွေသင့်ပါသည်။ ( အစားအစာများတွင်ပါဝင်သည့် သင်၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်မြင့်မားစေသော အချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်းကို ၀ မှ ၁၀၀ ထိသတ်မှတ်ထားသည်။ နံပါတ်မြင့်သော အစားအစာများသည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျင်မြန်စွာတက်စေပါသည်။ ) အမျိုးမျိုးသော Glucerna ထုတ်ကုန်များသည် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်နှင့် ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများ၏ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ပမာဏကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းရန် သိပ္ပံနည်းကျဖော်စပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစာခြေဖျက်မှုနှေးကွေးသော ကစီဓာတ်နှင့်ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် သွေးတွင်းအချိုဓာတ် မြင့်တက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ပြည့်အင့်မှုကို အချိန်ကြာမြင့်စွာထိန်းပေးထားနိုင်သည်။1,2
လူငယ်များအတိုင်း ခံစားနိုင်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း၊ ကြွက်သားကျန်းမာရေးနှင့် အထူးသဖြင့်သင့်၏ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ထိန်းညှိရန်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည် သင့်၏ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကျဆင်းခြင်း၊ သွေးပေါင်ကျဆင်းခြင်းနှင့် အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ အပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။1
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် သင်၏အင်ဆူလင်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးခြင်း
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် သင်၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေသည်သာမက ၎င်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအင်ဆူလင် (သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ အချိုဓာတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသော ဟော်မုန်း) ၏တုံပြန်မှု ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။ အသင့်အတင့်မှ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် ဝမ်းတွင်းအဆီ (ဝမ်းဗိုက်ဧရိယာအတွင်းရှိအဆီ) ကို လျော့ချရန်ကူညီပေးသည်။ ၎င်းအဆီများသည် သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ပိုလျှံ နေပါက သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် အင်ဆူလင်ကို မှန်ကန်စွာသုံးစွဲရန် ပိုမိုခက်ခဲစေပါသည်။ သင့်တွင် အင်ဆူလင်ကို ခုခံနိုင်သောအခြေအနေများရှိပါက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို လျော့ချပေးပြီး အချိုဓာတ်ကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်အောင်ကူညီပေးပါသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သော အဆစ်အမြစ်များကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း။
သွေးထဲတွင်အချိုဓာတ်များ အလွန်အကျွံရှိခြင်းကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသဖြင့် အချို့အဆစ်များ နာကျင်စေခြင်း သိုမဟုတ် တောင့်တင်းခြင်း တို့ကြောင့် အဆစ်များကို ပျက်စီးစေပါသည်။ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဖြစ်ပေါ်ရန် သင်အဝလွန်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများသည် အဝလွန်ကြပြီး ၎င်းအလေးချိန်ပိုများခြင်းသည် အဆစ်များကိုလည်း ဖိအားဖြစ်စေပါသည်။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် သွေးစီးဆင်းမှုကို တိုးစေပြီး အောက်ဆီဂျင်နှင့် လိုအပ်သော အာဟာရများကို ရရှိစေသည်။ နာကျင်မှုကိုလျော့ကျစေပြီး ခြေလက်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တိုးတက်စေပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်နေ့ရာအနှံ့တွင် နာကျင်မှုနည်းသောကြောင့် သင်လှုပ်ရှားမှုများပိုမိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်သောဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း၊ စိတ်အခြေအနေများတိုးတက်ခြင်း၊ ကောင်းစွာအိပ်ပျော်ခြင်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရန် အစီအစဉ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အလွန်တိကျသော နည်းလမ်း သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းများဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့် ကာလပတ်လုံး သင်နှင့်သင့်တော်သည့် အရာသာ လိုအပ်ပါသည်။2,3
၁။ သင့်တွင် ပိုမိုဆိုးရွားသောကျန်းမာရေး နောက်ခံအခြေအနေရှိမရှိကို ပထမဆုံးဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ သင့်အတွက် မည်သည့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏသည် သင့်အတွက် ကျန်းမာသည်ကို သေချာအောင် သိရန်လည်းလိုအပ်သည်။
၂။ အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် အာဟာရအဆာပြေမုန့်များ ဆောင်ထားခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မီနှင့် ပြုလုပ်ပြီးတိုင်းတွင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို တိုင်းတာမှတ်သားထားပါ။
၃။ သင်နှစ်သက်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းများကို မှတ်သားထားပါ။ ဤနေရာတွင် သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပိုမိုပျော်စရာဖြစ်စေရန်နှင့် သင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ ပိုမိုတိုးတက်အောင် လေ့လာနိုင်သည်။
၄။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကို အဆင့်ကျော်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင့်သည်ပင်ပန်းသလိုခံစားရပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ချင်လာနိုင်သည်။ ဖြည်းဖြည်းနှင့် ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းအဆင့်တိုင်းကို အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် သင်နှင့်လိုက်ရောညီထွေဖြစ်စေရန်နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကိုရပ်တန်စေနိုင်သည့် ဒဏ်ရာများ သို့မဟုတ် နာကျင်ခြင်းများကို လျော့နည်းစေပါသည်။
၅။ သင်၏သွေးထဲရှိသကြားဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်ကောင်းမွန်သော အာဟာရရှိခြင်းကဲ့သို့ပင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့် အခါမျိုးတွင်လည်း အမျိုးအစားသည် အဓိကကျသည်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအတွက် လှုပ်ရှားမှုများတွင် ထိရောက်မှုအရှိဆုံးအမျိုးအစားများတွင် အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်း၊ ပြေးခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ ယောဂနှင့်‌အလေးမအလေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်သည်။
၆။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် အခြားလှုပ်ရှားမှုများကို ရပ်တန့်မထားပါနှင့်။ သင်၏ ပုံမှန်တစ်နေ့တာတစ်လျှောက်လုံးတွင် တက်ကြွစွာနေထိုင်ခြင်းဖြင့် ကယ်လိုရီများလောင်ကျွမ်းပြီး ကျန်းမာသောအချိုဓာတ်ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍သင်သည် သင်၏ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို အစားအစာဖြင့်ထိန်းညှိရန်လိုအပ်ပါက အချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်း (GI) နိမ့်သော ဖြည့်စွက်အာဟာရများကို ရှာဖွေပါ။ (အချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်း (GI) သည် ၀ မှ ၁၀၀ အထိရှိသည့်အတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ နံပါတ်မြင့်လေ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို များလေဖြစ်သည်။) အမျိုးမျိုးသော Glucerna ထုတ်ကုန်များ အထူးသဖြင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ၏ အာဟာရဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့် ၎င်းတို့သွေးထဲရှိ အချိုဓာတ်ပမာဏကို ကူညီထိန်းညှိရန် အထူးစီမံထားခြင်းဖြစ်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အာဟာရ ၃၅ မျိုးနှင့်အတူ အစာခြေဖျက်မှုနှေးကွေးသော ကစီဓာတ်ဖြင့် ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် သွေးတွင်းအချိုဓာတ်များကို ထိန်းညှိနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။4
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ထိန်းညှိရန်အတွက် လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲမှုများကို စတင်ပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းပြောင်းလဲမှုများတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အစားအစာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျန်းမာသော ကိုယ်အလေးချိန်ထားရှိခြင်း၊ နေ့စဉ်တက်ကြွစွာနေထိုင်ခြင်းနှင့် မှန်ကန်သောဆေးဝါးများကို သောက်သုံးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အလုပ်ရှုပ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း ယနေ့နှင့် အနာဂတ်တွင် ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးသည်။ လူတစ်ဦး၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို အလေးအနက်ထားဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ၎င်းပြဿနာများမှာ နှလုံးနှင့်ပတ်သက်သောအခြေအနေများ၊ မျက်လုံးပြဿနာများ၊ အာရုံကြောပျက်စီးခြင်း နှင့် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများသည် ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ၎င်းတို့သည် ခွန်အားများပိုမိုတိုးလာခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများလျော့နည်းခြင်း၊ အရေပြားပေါ်ရှိအနာများပျောက်ကင်းခြင်းနှင့် ဆီးအိမ်ရောဂါများ ကူးစက်ခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်လာပါသည်။
ဆရာဝန်ကို အမြဲပြသခြင်းနှင့် နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းသည် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ထိန်းညှိကာကွယ်ရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။
သင်၏ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်သည့်အဖွဲ့သည် သင်၏အစားအသောက်ပုံစံကို ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်သလောက်ကိုသာစားသုံးခြင်းနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများနှင့် အစေ့အဆန်များကို စားသုံးပါ။ ကစီဓာတ်သည် သကြားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်စားသုံးလိုက်သော ကစီဓာတ်ပမာဏကို ကြည့်ပြီး သင်စားသုံးလိုက်သော အစားအစာများသည် အချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်းနိမ့်သော အစားအစာများဖြစ်ရန် သေချာစေဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ Glucerna ကဲ့သို့သော အစာအစားထိုးဖြည့်စွက် အာဟာရများသည် အစာခြေဖျက်မှုနှေးကွေးသော ကစီဓာတ်ကို ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများအတွက် သိပ္ပံနည်းကျထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အာဟာရဆိုင်ရာပြည့်ဝမှုများရရှိအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။1,2,3
လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကို စတင်မပြုလုပ်မီ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးဦီးနှင့် ပြုလုပ်သင့် မလုပ်သင့်ကို ဆွေးနွေးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မီနှင့် ပြုလုပ်ပြီးချိန်တွင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ပမာဏကို အမြဲတမ်းမှတ်သားထားပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီး အမြဲတမ်း အားကစားခန်းမတွင်သာ ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပြီးတက်ကြွစွာကစားရသော ဗီဒိယိုဂိမ်းများသည် လည်း တက်ကြွစွာနေထိုင် ရန်အတွက် ထိရောက်သောနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာ သင့်အားချွေးထွက်စေသော လှုပ်ရှားမှုကို မိနစ် ၃၀ ကြာပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ တက်ကြွသောလူနေမှုပုံစံသည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျှော့ချပေးကြောင့် သင်၏ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် သင့်၏ကိုယ်အလေးချိန်အပိုများကို ကျဆင်းစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။
သင့်ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ၏ ABC ဖြစ်သော သင်၏ A1c, သွေးပေါင်ချိန်နှင့် ကိုလက်စထရော စသည်တို့အား မည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည် ကို သင့်အား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ ၎င်းသည် သင်၏နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အခြားဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဆိုင်ရာပြဿနာများ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို လျော့ချနိုင်ရန်ကူညီပေးပါသည်။ နှစ်စဉ်မျက်စိစစ်ဆေးခြင်း၊ ခြေထောက်အနာများနှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာပျက်စီးခြင်းများအတွက် ဆရာဝန်ထံမဖြစ်မနေ သွားရောက်ပြသရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီး သင်၏အရက်သောက်သုံးမှုကို စောင့်ကြည့်ပါ။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါသည် နှလုံးရောဂါ၊ မျက်စိပြဿနာနှင့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပြဿနာများ ကဲ့သို့သော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းကို လုံးဝရပ်တန့်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုပြဿနာများကြုံတွေ့လာရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အရက်အလွန်အကျွံ မသောက်သုံးပါက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ အရက်သည် သင်၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို အလွန်မြင့်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်ကျသွားခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍သင်သည် အရက်သောက်သုံးခြင်းကို ရှောင်လွှဲမရသောအခြေအနေတွင်ရှိပါက အရက်မသောက်သုံးမီ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ဦးစွာစစ်ဆေးပါ။ ထို့နောက် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်များ အလွန်နိမ့်ကျသွားခြင်း သို့မဟုတ် မြင့်တက်ခြင်းများ မဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။2
အစားအသောက်အလေ့အကျင့်နှင့် လူနေမှုပုံစံစသည့် အဓိကပြောင်းလဲခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းသည် မည်သူအတွက် မဆို အဓိကစိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် သင်ကကျန်းမာရေးကို ဦးစားပေးပြီး သင့်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ဆက်လက်ထားရှိဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုပြုရန် မလွယ်ကူပါ။
လူတိုင်းသည် စိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးမျိုးကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ကြုံတွေ့ရသည်။ စိတ်ဖီစီးမှုများကို မရှောင်လွှဲနိုင်သော်လည်း ၎င်းကို စီမံထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ စိတ်ဖီစီးမှု ဟော်မုန်းများသည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သောကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် နှစ်မျိုးလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများ လိုက်နာနိုင်သည့် အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ကြာရှည်စွာ ကောင်းမွန်သည့်အိပ်စက်ခြင်းမရှိသည့် သူများသည် နေ့စဉ်ဘဝတွင် ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ညတွင်ကောင်းစွာအိပ်စက်ခြင်းသည် နံနက်ခင်း၌ ကောင်းစွာနိုးကြားရုံသာမက ဆာလောင်မှု၊ အလေးချိန်နှင့် သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကို ထိန်းချုပ်သော ဟော်မုန်းများကို ထိန်းညှိပေးပါသည်။ ရက်အနည်းငယ်အိပ်ရေးမဝခြင်းသည်ပင်လျှင် အင်ဆူလင် ဆန့်ကျင်မှုကို မြင့်တက်စေသည်။ အကယ်၍သင့်တွင် ယခင်က ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါမရှိခဲ့ပါက အိပ်ရေးမဝခြင်းဖြင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်မှု အလားအလာကို မြင့်တက်စေသည်။ လွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုမှာ အထူးသဖြင့် အာရှနိုင်ငံများ လက်ဖက်ရည်သောက်လေ့ရှိသော မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်တွင် ကဖိန်းဓာတ်ပါသော အချိုရည်များကို ကန့်သတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သက်သောင့်သက်သာရှိသောအိပ်ရာ၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီးအေးမြသော အခန်းနှင့် တိကျသောအိပ်ချိန်သတ်မှတ်ပြီး အိပ်စက်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏စိတ်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာအား နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခု အဖြစ် အလေ့အကျင့်ပြုလုပ်ပေးပါ။1
လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီး စိတ်ဖီစီးမှုများ ဖြေဖျောက်ခြင်း
ကျန်းမာရေးပြဿနာအများစုအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျော့ချရန်နှင့် endorphins, dopamine, adrenaline နှင့် endocannabinoid ကဲ့သို့သော ကောင်းမွန်သည့် ဓာတုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ကူညီနိုင်သည်။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မီနှင့်ပြုလုပ်ပြီးတိုင်းတွင် မည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို မှတ်သားထားပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်ပုံမှန်ထက်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် (hypoglycemia) သင်၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ် အရမ်းနိမ့်ကျ သွားနိုင်သည်။ သင်၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်သည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အလွန်အမင်းနိမ့်ကျနေပါက အလွန်အမင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်းနှင့် ဆေးရုံတက်ရခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ထို့ကြောင့် သင်၏ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ အခြေအနေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးသောလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကို ရှာဖွေရာတွင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ယေဘုယျအားဖြင့် သင်သည် အားကစားလုပ်သည့် နေရာသို့သွားရောက်ရန်မလိုအပ်ဘဲ အိမ်၌ရှိသောအရာများနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ လမ်းလျှောက်၍လှေကားအတက်အဆင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ ကုန်စုံဆိုင်သို့သွားသည့်အခါတွင် ကားနှင့်သွားမည့်အစား လမ်းလျှောက်သွားလာခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကသင့်ခံစားချက်ကို ကူညီသည့်အခါတွင် ပို၍ပင်လွယ်ကူနိုင်ပါသည်။ သင်တစ်နေ့တာလုံးစွမ်းအင်အားလုံးအသုံးပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ၎င်းသည်ညဘက်ကို ကောင်းစွာအိပ်စက်အနားယူနိုင်ဖို့ သင့်ကိုကူညီပေးပါသည်။1,2
သင်သည်စိတ်ဖိစီးမှုများလာသည်နှင့် ၎င်းအရာများကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံဖြင့် ကြည့်နိုင်ရန် အချိန်ခဏယူပြီး အနားယူပါ။ တရားထိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှုထုတ်ခြင်း အလေ့အကျင့်များပြုလုပ်ခြင်းသည် သင်၏စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ၎င်းနည်းလမ်းများသည် စိတ်ဖိစီးသည့်အခါ လေ့ကျင့်သင့်သည့်နည်းလမ်း မဟုတ်သော်လည်း အခြားချိန်များတွင် လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် အထောက်အကူပြုစေပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းကဲ့သို့ပင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ထိန်းညှိသည့်အခါတွင်လည်း သင်မလုပ်နိုင်သည့်အရာများကို အာရုံမစိုက်ပါနှင့်။ သင်လုပ်နိုင်ပြီး ပြီးမြောက်ခဲ့သည့်အရာများကို အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့် မည်သို့တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ရမည်ကို ရှာဖွေပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆရာဝန် သို့မဟုတ် အခြားဆေးပညာရှင်များနှင့် ဆက်သွယ်ပြီးအကြံဉာဏ်များ တောင်းခံရန် မည်သည့်အခါမှ မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။2
အာဟာရနှင့် Glucerna ထုတ်ကုန်များသည် ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများကို မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းသည် စိတ်ဖိစီးမှုလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သဖြင့် သင့်၏ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို အာဟာရဖြင့် ထိန်းညှိခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လန်းဆန်းမှုကို ခံစားရစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်း (GI) နိမ့်သောအစားအစာများသည် ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ( Glycemic Index ကို ၀ မှ ၁၀၀ အထိသတ်မှတ်သည်။ Gl မြင့်သောအစားအစာများသည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျင်မြန်စွာမြင့်တက်စေသည်။) ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဖျားနာပြီးနာလံထစချိန်များတွင် Glucerna ကို အစားထိုးသောက်သုံးနိုင်သည်။ Glucerna တွင်ပါဝင်သည့် အစာခြေဖျက်မှုနှေးကွေးသော ကစီဓာတ်သည် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်လာသော သွေးတွင်းသကြားဓာတ်တိုးမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးပါသည်။3
ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများအတွက် အစာစားသုံးရာတွင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်များ
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသော လက္ခဏာတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အစာစားချိန်ကို မစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့စားသောအစာပမာဏသည်လည်း တသမတ်တည်းကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ တသမတ်တည်းနှင့် ပုံမှန်ထိန်းခြင်းသည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အရေးကြီးသော အချက်များဖြစ်သည်။ ဤအလေ့အကျင့်များ ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်လာပါက ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။
အာရုဏ်တက်ချိန်တွင် မြန်မာလူကြီးအများစုသည် ဘာသာရေးကိစ္စများပြုလုပ်ရန် (သို့မဟုတ်) အခြားကိစ္စတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ဖို့သွားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် နံနက် ၄ နာရီမှ ၅ နာရီအကြား ဟော်မုန်းများမြင့်တတ်လာခြင်း၊ အစားမစားခင် အချိုဓာတ်ပမဏမြင့်တက်မှုရှိကြောင်း သင်သိပါသလား။ ဆိုလိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်ထိန်းညှိရန် သင့်တော်သော အင်ဆူလင်ပမာဏမရှိသောကြောင့် သွေးတွင်းအချိုဓာတ်များ မြင့်တက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူတစ်‌ယောက်အတွက် ဤအရာကိုထိန်းချုပ်ရန် ဘယ်အရာကပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
စောစောထလျှင် စောစောညစာစားပါ။ ၎င်းသည် သင့်အား ကစီဓာတ်ကြောင့် သွေးတွင်းအချိုဓာတ်မြင့်တက်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထိန်းညှိပေးပါသည်။
သင်၏နေ့စဉ်လိုအပ်သော ကစီဓာတ်များကို နံနက်စာမှရယူပါ ပြီးလျှင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကင်များ သို့မဟုတ် ရိုးရာကုလားပဲမှုန့်မပါသော ဟင်းနုနွယ်ရွက်သုပ် ကဲ့သို့ ကစီဓာတ်နိမ့်ပြီး အမျှင်ဓာတ်မြင့်မားသော အစားအစာများကို ညစာတွင်စားသုံးပါ။
ညစာစားပြီးနောက် သ‌ရေစာမုန့်များစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ စားသုံးမည်ဆိုပါက ဆားမပါသော အခွံမာသီး သို့မဟုတ် ကျွဲကောသီးများ ကို ရွေးချယ်ပါ။
ညစာစောစောစားသုံးခြင်းသည် လမ်းအနည်းငယ်လျှောက်ပြီးနောက် သင်စားလိုက်သော ကယ်လိုရီများကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။
အစားအစာအလွန်အကျွံစားခြင်းနှင့် သကြားစားသုံးခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန် မိမိနှစ်သက်သော အစားအစာများကို တစ်ကြိမ်စားသုံးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် အဆီမြင့်မားသော အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကဲ့သို့ အစားအစာကို စားသုံးပြီးလျှင် သင့်ညစာအတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြုတ်နှင့် ငါးကင်ကို ရွေးချယ်ရပါမည်။
အစားအစာများနှင့် သင့်ဆာလောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ခံစားချက်ကို သတိရှိပါ။
အစားအစာ ဆာလောင်မှု မဖြစ်စေဖို့ အစာစားချိန်ကို မကျော်ပါစေနှင့်။
ကားထဲ၊ ဘတ်စ်ကားပေါ်နှင့် သွားရင်းလာရင်းအစားမစားပါနှင့် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းအချိန်များတွင် လွယ်ကူသည့် အစားသောက်များကိုသာ စားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းအစားအစာများသည် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်နိုင်ပါ။
အစားအသောက်များကို အမြန်စားသုံးခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါ။ အစားစားခြင်းသည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အလေ့အကျင့်ဖြစ်အောင် စားသုံးသင့်သည်။
ကျန်းမာသော အစားအသောက်များကို စတင်စားသုံးခြင်းကာလများသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်အတွက် အရသာရှိသောအစားသောက်များကို စားသုံးနေခြင်းမှ ကျန်းမာစေသည့် နည်းလမ်းများကို ပြောင်းလဲရခြင်းသည် အချိန်ယူရပြီး လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ရန်မှာလည်း မလွယ်ကူပါ။
သို့သော် သင်၏အာဟာရဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို ပြည့်စုံမှုမရှိဟု ခံစားရလျှင် အမျိုးမျိုးသော အာဟာရသောက်စရာများကို ရွေးချယ်စဉ်းစားပါ။ Glucerna တွင် ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားပြီး ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်ပေါင်းစုံပါဝင်သောကြောင့် သင်၏နေ့စဉ်ဘဝတွင် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။ Glucerna ထုတ်ကုန်များသည် သင်၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို တည်ငြိမ်စေသည့် အချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်း နိမ့်သော ဖြည်းညှင်းစွာအစာချေဖြတ်နိုင်သော ကစီဓာတ်များဖြင့် သိပ္ပံနည်းကျဖော်စပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများသည် ကစီဓာတ် နှင့် ပတ်သတ်၍ ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ။
ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများသည် ကစီဓာတ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ။
အဓိကအားဖြင့်ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအမျိုးအစား (၃)မျိုး ရှိပါသည်။ တစ်ခုမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုသွေးချိုဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် အမျိုးသမီးများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ကျန်အမျိုးအစား ၁ နှင့် ၂ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါတို့သည် ကျား၊ မ အားလုံးတို့တွင်ဖြစ်ပွားပါသည်။ အမျိုးအစား ၁ သည် ခန္ဓာကိုယ်မှ အင်ဆူလင်လုံလောက်စွာမထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးအစား ၂ သည် အများဆုံးဖြစ်ပွားပြီး ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်လိုက်သော အင်ဆူလင်ကို ကောင်းစွာအသုံးမပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့်အမျိုးအစား ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါမဆို သင့်၏သွေးတွင်း၌ အချိုဓာတ်မြင့်မားပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ပျောက်ကင်းအောင်မကုသနိုင်ပါ။ သို့သော် GI (Glycemic Index) နိမ့်သောအစားအစာများ စားသုံးပြီး ဆေးဝါများသောက်သုံး၍ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။
ကစီဓာတ်သည် သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အဓိက စွမ်းအင်အရင်းအမြစ် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ သကြား၊ ကစီဓာတ်များ၊ အသီးအနှံများမှရသောအမျှင်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အစေ့များ၊ ပဲပင်များ၊ နို့နှင့် အခြားပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာတို့ဖြစ်သည်။ သင်စားသုံးလိုက်သော ကစီဓာတ်အမျိုးအစားနှင့် ပမာဏနှစ်မျိုးလုံးသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ သကြားဓာတ်ပမာဏကို အကျိုးသက်ရောက်သည်။ထို့ကြောင့် တစ်နေ့တာအတွက် သင်စားသုံးမည့် ကစီဓာတ်ပမာဏကို ဖြန့်ကျက်ထားရန် လိုအပ်သည်။
အစားစားပြီးနောက် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်မြင့်တက်ခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ကစီဓာတ်အားလုံးသည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပေါ်တွင် သက်ရောက်ပုံခြင်း မတူညီပါ။ အချို့ကစီဓာတ်ပါသော အစားအစာများဖြစ်သည့် ပေါင်မုန့်ဖြူနှင့် အဖြူရောင်ခေါက်ဆွဲ ကဲ့သို့သော အစားအစာများသည် အလျင်အမြန်အစာကြေပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို မြင့်မားစေနိုင်သည်။ အချို့အစားအစာများ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝသောပေါင်မုန့်နှင့် ပဲကဲ့သို့သော အစားအစာများသည် နှေးကွေးစွာ အစာကြေပြီး သွေးတွင်း သကြားမြင့်တက်မှု လျော့နည်းပါသည်။ ကစီဓာတ်အမျိုးအစားနှင့် ပမာဏပေါ်မူတည်၍ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင်၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ရရှိစေနိုင်ရန်အထောက်အကူပြုပါသည်။
သွေးတွင်းအချိုဓာတ် အညွှန်းကိန်း (GI) သည် အခြားအစားအစာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ သင်၏ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏ မည်မျှ မြင့်တက်သည် ပေါ်မူတည်၍ အစားအစာများကို အဆင့်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ၀ မှ ၁၀၀ အထိအတိုင်းအတာဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ သင်၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်စေနိုင်သည့် အစားအစာများသည် အနည်းငယ်စွာ မြင့်တက်သော အစားအစာများထက် အညွှန်းကိန်းနံပါတ်မြင့်သည်။ သွေးတွင်းအချိုဓာတ် အညွှန်းကိန်း (GI) သည် သင့်အားအစားအစာကို စနစ်တကျရွေးချယ်နိုင်ရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။
ကစီဓာတ်ရေတွက်ရန် မည့်သည့်အစားအစာများတွင် မည်သည့် ကစီဓာတ်ပါဝင်သည်ကို သိရှိရန်လိုအပ်ပြီး သင်စားသောအစားအစာများ၏ ကစီဓာတ်ဂရမ်အရေအတွက်ကိုလည်း ခန့်မှန်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်များသည် များသောအားဖြင့် ရိုးရှင်းသော အစားအစာ အသေးစိတ်မှတ်တမ်းများနှင့် အစားအစာတံဆိပ်များကို ဖတ်ရှုခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အစပိုင်းတွင် ၎င်းတို့သည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် သင်၏အစားအစာ အစီအစဉ်များကို ဖန်တီးရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတို့သည် သင်၏ကိုယ်အလေးချိန်၊ဆေးဝါးများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုး လုပ်စဉ်များ၊ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်မှုတည်ပြီး သင့်အားကျန်းမာသောအစားအစာကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးအချက်မှာ သင်သည် သင်၏အစားအစာဇယားနှင့် အစားအစာကို ပြောင်းလဲရန်နှင့် ချိန်ညှိရန်လိုအပ်၊ မလိုအပ်ကို သိရှိရန် ၆ လတစ်ကြိမ်တွင် သင်၏ အာဟာရပညာရှင်နှင့် တွေ့သင့်ပါသည်။
Glucerna ထုတ်ကုန်များသည် ဆီးချိုသွေးချိုကို မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
GI နည်းသောအစားအစာများသည် ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Glucerna သည် ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့် ၎င်းတို့၏သွေးထဲရှိ ကလူးကို့စ်အဆင့်ကို သဘာဝအရစီမံရန် အထူးပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။ အစာကြေပျက်မှု နိမ့်သောကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ထုတ်ထားပြီး ၎င်းသည်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်မြင့်တက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းညှိခြင်းသည် ကိုယ်ခံစွမ်းအား အပေါ်တွင် ကောင်းမွန်သော သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများသည် မိမိတို့၏ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်ခြင်း (hyperglycemia) နှင့် နိမ့်ကျခြင်း (hypoglycemia) တို့ကို စီမံထိန်းညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ စဉ်ဆက်မပြတ်သော အတက်အကျတို့သည် မိမိတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝတွင် အားအင်မှစတင်ကာ စိတ်အပြောင်းအလဲအထိ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါ လက္ခဏာများအား ဂရုစိုက်ခြင်းသည် အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များအား ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် အရေးပါသည်။ အမျိုးအစား (၁) ဖြစ်စေ၊ အမျိုးအစား (၂) ဖြစ်စေ ၎င်းတို့အား အချိန်မည်မျှကြာကြာ ရှိထားပြီးဖြစ်စေ ကောင်းမွန်သောဘဝအား သင်ရရှိနိုင်ပါသေးသည်။ ထိုသို့ရရှိရန် သင့်ကိုယ်အလေးချိန်၊ အစားအစာနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု၊ ဆေးဝါးတို့အားစီမံခြင်းနှင့်အတူ မျှော်လင့်ချက်ထားရန်သာ လိုအပ်သည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာကျက်ခြင်းနှင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်
ရှရာ သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာတစ်ခုသည် ကျက်ရန် တစ်ပတ်လောက်ကြာနေပါက သွေးလှည့်ပတ်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ပိုးဝင်ခြင်းနှင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်မြင့်မားနေခြင်းတို့ကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုလက္ခဏာ အများစုမှာ ဆီးချိုသွေးချိုလက္ခဏာသာ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအရာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတိုက်ထုတ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အားကစားပြုလုပ်ရန် အကြံပြုပါသည်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ ကြွက်သားများသည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို စွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးပြုပြီး သင်၏သွေးထဲတွင် ၎င်းတို့၏တိုးပွားလာမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းသည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို တစ်နာရီအတွင်း လျှော့ချပေးရုံသာမက ရေရှည်အတွက်ပါ အကျိုးရှိစေသည်။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နည်းခြင်းသည် ဘက်တီးရီးယား ရှင်သန်ရန် စားသောက်ရမည့် အစာနည်းပါခြင်းဖြစ်ပြီး ရောဂါကူးစက်မှု နည်းပါးစေမည်။ ကိုယ်ခံအား နည်းခြင်းကြောင့် သင်ခဏခဏ ဖျားနာပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် ခက်ခဲနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဆီးချိုသွေးချိုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် အစာအစားကို မျှတမှန်ကန်စွာ စားသုံးရမည်
မျှတမှန်ကန်စွာ စားသုံးပြီး ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ထိန်းချုပ်ပါ၊ ထိန်းချုပ်နိုင်လျှင် သင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ပမာဏသည်လည်း ကျဆင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ ပဋိဇိဝဓာတ်များ တိုးပွားလာပြီး ‌ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခြင်းကို ကန့်သတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။ အစားအသောက်မှတစ်ဆင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်များ ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုလည်း ပိုမိုမြန်ဆန်လာမည်ဖြစ်သည်။
စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေခြင်းဖြင့် ဆီးချိုသွေးချိုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပြီး ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေနိုင်သည်။
ကိုယ်တွင်းပိုင်း စည်းမျဉ်းစနစ် (Circadian Rhythm) ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် ကော်တီဆောလ်နှင့် ဖက်တီးအက်ဆစ် ပမာဏတို့ ပါဝင်မှုနှုန်းသည်မြင့်တက်လာသဖြင့် သင်၏မျက်လုံးကို မှိတ်ထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများသည် အိပ်စက်စဉ် အသက်ရှူ ရပ်လိုက်၊ ရှူလိုက် ခဏခဏ ဖြစ်သည့် Sleep Apnea ကို ခံစားရပြီး ၎င်းသည် နှလုံးကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ သင်ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ရလျှင် ခန္ဓာကိုယ်သည် ပြန်လည်စတင်ကာ နှလုံးကို ကျန်းမာစေမည်။ စွမ်းအင်များများနှင့် အလုပ်ပိုမိုလုပ်နိုင်ပြီး ကယ်လိုရီများများလောင်ကျွမ်းကာ စိတ်ခံစားမှုကောင်းမွန် တက်ကြွစေမည်ဖြစ်သည်။ ပိုကောင်းသည့်အချက်က အကြိုဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိနေသည့်အခါ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုသွေးချိူ အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကို နှေးကွေးစေနိုင်သည်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကြောင့် စိတ်ကျခြင်းမှာ ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှု တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သင်စိတ်ထိခိုက်နေပါက အိပ်ရေးဝမဝ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ပြန်မေးကြည့်သင့်ပါသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူတွေ အစာအာဟာရမှတစ်ဆင့် ကိုယ်ခံအားကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်ကြမလဲ
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများကို ကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်နိုင်ချေမြင့်မားသည်ဟု မှားယွင်းသော အယူအဆများရှိနေသည်။ တကယ်တော့ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိနေခြင်းကြောင့် ကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်နိုင်မှုနှုန်း မမြင့်နိုင်ပါ။ အဲ့ဒီအစား ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိနေခြင်းကြောင့် ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆိုးကျိုးများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ ကိုယ်ခံအားလျော့နည်းနေသောကြောင့် ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါရှိနေခြင်းက ပုံမှန်အားဖြင့် စိုးရိမ်ရနိုင်ချေရှိပါသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူတွေအတွက် နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ ခုခံကာကွယ်နိုင်ရန် ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ အဓိကကျပါသည်။ ကူးစက်ရောဂါကိုတိုက်နိုင်ဖို့ ကျန်းမာသောကိုယ်ခံအားစနစ်သည်သာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူတွေရဲ့ အကောင်းဆုံး အကာအကွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ အမျိုးအစား (၂)ရှိသူများသည် ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ရေးကိုအာရုံစိုက်ဖို့ ပို၍ပင်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သွေးထဲတွင်သကြားဓာတ်မြင့်မားနေခြင်းကြောင့် ကိုယ်ခံအားခုခံကာကွယ်မှုစနစ်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပီး ရောဂါကူးစက်မှုကိုပိုမိုကျရောက်စေနိုင်သည်။ အာဟာရကြွယ်ဝသောအစားအစာများကို မိမိတို့​၏အစားအစာများတွင် ထည့်သွင်းစားသုံးခြင်းသည် ကိုယ်ခံအားခုခံကာကွယ်မှုစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးရုံသာမက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပါဝင်မှုပမာဏကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများသည် စိတ်ဖိစီးမှုများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း ၊ လုံလောက်စွာအိပ်စက်ခြင်းနှင့် အစာအာဟာရဖြင့် ကိုယ်ခံအား စနစ်ကောင်းမွန်အောင် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ကို အလေးထားလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူ​များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည့်အစားအစာနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းလမ်းမျိုးစုံနှင့် ငြင်းခုံမှုများရှိနေသလို ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူရော မရှိသူရော နှစ်ဦးလုံးအတွက် ထောက်ခံအကြံဉာဏ်ပေးလိုသောအစားအသောက်ပမာဏမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထူးထူးခြားခြား အစားအစာများဝယ်စရာမလိုဘဲ ကြိုတင်အစီအစဉ်ဆွဲမှုအပေါ်တွင်သာ ပိုမိုအားထုတ်သင့်ပါသည်။
မည်သည့် အစာအာဟာရဗေဒပညာရှင် (သို့မဟုတ်) အာဟာရတတ်ကျွမ်းပညာရှင်မဆို “ပမာဏထိန်းချုပ်မှု”သည် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း သင့်အားပြောပြပါလိမ့်မည်။ မှန်ကန်သောအချိုးအဆမှာ အောက်ပါအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ပန်းကန်ထဲတွင် အချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်း ပါဝင်မှုနည်းသော ကစီဓာတ်များ (Low Glycemic Index (GI) Carbohydrates) ဖြစ်သော Whole Grain ပေါင်မုန့် ၊ အသီးအနှံအစေ့အဆံ ၊ ပဲကြီး၊ ပဲလေး နှင့် အခြားပဲအမျိုးအစားများ လေးပုံပုံ တစ်ပုံ ။ အသားဓာတ်ပြည့်ဝသော အနီရောင်အသား ၊ ငါး၊ ကြက်သား (အရေခွံမပါ) နှင့် သတ်သတ်လွတ်စားလျှင် တိုဖူး လေးပုံပုံ တစ်ပုံ။ ကျန် နှစ်ပုံပုံ တစ်ပုံကိုတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ၊ မုန်လာဥနှင့် ပဲများ ပါဝင်သင့်သည်။ သင်​၏ထမင်းပန်ကန်ထဲတွင် လတ်ဆတ်သော အစားအစာများ “Rainbow Color” ဟုဆိုနိုင်သည့် အာဟာရမျိုးစုံပါဝင်နေစေရန် စဉ်းစားရပါမည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများအတွက် ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သော အစားအစာစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။
Beans & Legumes (ပဲအမျိုးမျိုး)
ကုလားပဲအပါအဝင် ပဲအမျိုးမျိုးတို့သည် အသားဓာတ် နှင့် အမျှင်ဓာတ် များစွာရရှိနိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်မှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်သော Zinc ဓာတ် ၊ လုံလောက်သော ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ် ပမာဏပါဝင်ပါသည်။ ကုလားပဲတွင်ပါဝင်သော ပရိုတိန်းဓာတ်သည် ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပီး အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းညှိပေးပါသည်။ အမျှင်ဓာတ်စားသုံးမှု တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် အစာမစားခင်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။
မုန်လာဥသည် ဗီတာမင်အေအဓိကအရင်းမြစ်ဖြစ်သည့် ဘီတာကရိုတင်းဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီး သင်​၏မျက်လုံးများကို ကျန်းမာစေရန် ကူညီထိန်းသိမ်းပေးသည်။ မုန်လာဥတွင် မျက်လုံးပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သော Lutein ပါဝင်သည်။ အမြစ်အမျိုးအစားဖြစ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည် ဗီတာမင်စီပါဝင်သောကြောင့် သင်​၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
Bell Peppers (ငရုတ်ပွ)
ငရုတ်ပွများတွင် ကယ်လိုရီနည်းသော်လည်း အာဟာရဓာတ်မြင့်မားသည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ခံအား ခုခံကာကွယ်မှုစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏ဆဲလ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်သည့် free radicals တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သော ဗီတာမင်စီပါဝင်ပါသည်။ အစွမ်းထက် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် ဗီတာမင်စီသည် အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများ၏ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ပမာဏကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ ဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓာတ်များ၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် Vitamin A ၊ vitamin E ၊ vitamin K1 ၊ folate ၊ potassium ၊ capsanthin ၊ violaxanthin ၊ lutein ၊ quercetin နှင့် luteolin တို့ပါဝင်ပါသည်။
ဂေါ်ဖီထုပ်အနွယ်ဝင်အရွက်များဖြစ်သည့် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းသည် ဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓာတ်များ၊ အမျှင်ဓာတ် နှင့် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းပြည့်ဝနေသော အာဟာရဓာတ်အားပေးစက်ရုံကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းသည် ကျန်းမာသောကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသော အကောင်းဆုံးဗီတာမင်စီ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းတွင်ပါဝင်သော အမျှင်ဓာတ် နှင့် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများသည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပါဝင်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး သင်၏ကျန်းမာရေးကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
အခွံမာသီးသည်အရသာရှိပြီး အစာစားရာတွင် ထည့်သွင်းစားသောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းတို့မှာ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်ပီး အစာကျေလွယ်သော ကစီဓာတ်ပါဝင်မှု နည်းသည်။ လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးအရ အခွံမာသီးကိုပုံမှန်စားသုံးခြင်းက ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။ အခွံမာသီးတွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများစွာပါဝင်ပီး ကိုယ်ခံအားခုခံကာကွယ်မှုစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူတွေက ရောဂါကူးစက်နိုင်ချေ ဘာလို့ မြင့်မားနိုင် တာလဲ ၊ သူတို့ရဲကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ဘယ်လိုထောက်ပံ့မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသလဲ
ဆီးချိုသွေးချိုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း insulin ထုတ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့် အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ သကြားဓာတ်သည် ဆဲလ်များအတွင်းသို့ထိထိရောက်ရောက်မပျော်ဝင်နိုင်သောအခါ သွေးကြောထဲတွင် သကြားဓာတ် စုပြုံလာသည်။ အကယ်၍ ဤကဲ့သို့ဆက်ဖြစ်နေလျှင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပါဝင်မှု ပမာဏမြင့်မားလာခြင်းကြောင့် နှလုံး ၊ ကျောက်ကပ် ၊ အာရုံကြောနှင့် အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် စိုးရိမ်ရသော ကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြစ်လာ နိုင်ပါသည်။ အဖြစ်များသော အမျိုးအစားမှာ အင်ဆူလင် မထုတ်လုပ်နိုင်သော ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ အမျိုးအစား ၁ နှင့် ခန္ဓာကိုယ်က ထုတ်လုပ်လိုက်သည့် အင်ဆူလင်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးမပြုနိုင်သော ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ အမျိုးအစား ၂ တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဤအချက်က ယေဘုယျခံနိုင်ရည်ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။ ဤတွင် သင်သတိထားရမည့် အဓိကအချက်အနည်းငယ် ရှိသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါသည် အဓိကနာမကျန်းဖြစ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးများကို မည်သို့မြင့်တက်စေသနည်း။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိက နာမကျန်းဖြစ်မှုကြောင့် ဆိုးရွားသည့်အကျိုးဆက်များ နှင့် ဆေးရုံတက်ခဲ့ရသည့် လူနာများထဲမှတချို့သည် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ အဓိကရောဂါနာမကျန်းမှု ပျောက်သွားသည့်တိုင် ရေရှည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိလာနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သကြားဓာတ်မှထုတ်လွှတ်သော မော်လီကျူးများသည် ရောဂါကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်နိုင်သည့် Antimicrobial Beta-defensin Peptides တို့ကိုအားနည်းစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများတွင် ရှိသော နာတာရှည် သွေးတွင်းအချိုဓာတ်များခြင်း (Chronic hyperglycemia) သည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အရည်နှင့်တစ်ရှုးများတွင် အက်စစ်များပြားလာခြင်းကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏လှုပ်ဆောင်မှုကို အတားအဆီးဖြစ်စေသည်။ သွေးထဲတွင်သကြားဓာတ်မြင့်မားနေခြင်းကြောင့် ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တို့ကို ရှင်သန်စေသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများ ကူးစက်ရောဂါများမှ မိမိတို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်သော နည်းလမ်းများက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
နာမကျန်းဖြစ်မှုအများစုတွင် ကာကွယ်ဆေးများရှိသော်လည်း ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများအနေဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် လုံးဝထိတွေ့မှုမရှိခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အခုလို ကပ်ရောဂါမှမဟုတ်ပဲ မည်သည့်ကူးစက်ရောဂါကိုမဆို ကူးစက်ခံရနိုင်ချေရှိလျှင် ပြင်ပနှင့်ဆက်သွယ်မှုလျှော့ချခြင်း၊ လူစုလူဝေးရှောင်ရှားခြင်း၊ အကယ်၍မဖြစ်မနေသွားရမည်ဆိုလျှင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ခြောက်ပေအကွာနေခြင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ခံထားသော mask တပ်ဆင်ခြင်း၊ နေမကောင်းသောသူများနှင့်မထိတွေ့ခြင်း၊ လိုအပ်လျှင်လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် လက်ကိုစနစ်တကျဆေးကြောခြင်းတို့ကို ယေဘုယျအနေဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လမ်းညွှန်ချက်များကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်လိုက်နာရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိပါက ကျန်းမာသောနေထိုင်မှုပုံစံ၊ ရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်း၊ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း မကြာခဏပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သောဆေးဝါးသောက်သုံးခြင်းများပြုလုပ်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်အရင်ကမခံစားရဖူးသော လက္ခဏာများ ခံစားရပါက ကျန်းမာရေးဌာန အရေးပေါ်ဖုန်းသို့ ဆက်သွယ်ခြင်း ၊ ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဆရာဝန်​၏အကြံပေးချက်များကို လိုက်နာခြင်းတို့သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဆိုင်ရာ တိကျသောသီးသန့်အာဟာရမရှိသော်လည်း သကြားဓာတ်ပါသော အချိုရည်များသောက်သုံးခြင်း၊ အရမ်းချိုသော အသီးနှံများစားသုံးခြင်း၊ သကြားပါဝင်မှုများသောမုန့်များ၊ အချိုများ လျော့ချ၍ ကယ်လိုရီကိုစတင်လျော့ချလိုက်ပါ။
1. The Role of DSF (Playlist)
2. Interview with Dr. U Ye Myint